Uphahla olumangalisayo luzolile & nelanga - I-Airbnb
Uphahla olumangalisayo luzolile & nelanga
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMacia
Uphahla oluhle kakhulu olukhanyayo kunye nethayile enkulu yelanga. Ithe cwaka kakhulu nangona indawo yayo kumbindi wedolophu. Ilungele izibini ezifuna ukuphumla, i-gastronomy, i-architecture yembali, abathandi bokuhamba okanye ukuhamba ngebhayisikile.
Ikwahlala idumile kwiimbaleki ze-triathlon eziza kuqeqesha okanye ukukhuphisana kwingingqi.
Le ndlu ikumgangatho ophezulu, inethafa elikhulu elinelanga kunye negumbi lokulala labantu ababini. Ixhotywe ngokupheleleyo, kunye ne-WIFI, i-air conditioning, indlu yangasese kunye negumbi lokuhlambela eline-hairdryer, ikhitshi evulekileyo kwigumbi lokuhlala, ifriji, i-ceramic hob, i-oven microwave, i-dishwasher, umatshini we-nespresso, umatshini wokuhlamba kunye ne-TV (akukho satellite).
Iishiti kunye neetawuli zinikezelwe.
Zonke iifestile zinezivalo zerola zombane.
Isakhiwo sine-lift (ngendlela, iyancipha kwaye ithule).
Esi sakhiwo sikumbindi wembali waseBanyolas, kanye ecaleni koSodolophu wasePlaza. Kukho iivenkile zokutyela ezigqwesileyo, iiterraces kunye neevenkile.
Kuhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka echibini. Ukuhamba kakuhle echibini (ubude be-45 min-1h)
Unokufika ngebhasi ukusuka eGirona, kunye nokuhamba kwisikhululo seTGV. Uhambo luthatha imizuzu engama-20 kwaye indawo yokumisa ikufuphi neflethi.
I-Girona ine-cathedral entle kunye nekota endala apho isizini yesithandathu ye-Game of Thrones yafotwa.
Imizuzu engama-20 ukusuka eBesalu, idolophu entle yamaxesha aphakathi eneendlela ezinqatyisiweyo kunye nebhulorho enqatyisiweyo yenkulungwane ye-12.
Imizuzu engama-35 ukusuka eFigueras, apho ikhoyo imyuziyam yaseDali entle.
Imizuzu engama-40 ukusuka eCosta Brava.
I-Banyolas yayisisixeko se-Olimpiki esineziganeko zokubhexa kwi-Barcelona 92' Games. Ukusukela ngoko, ibe sisihlalo semisitho eliqela yokubhexa kwihlabathi, kwaye ngoku ibambe iNdebe yeHlabathi yeTriathlon. Isiphelo esichukumisayo kukhenketho lwezemidlalo, ukukhwela ibhayisekile, ukubaleka, i-triathlon, i-kayaking, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukubheqa, ukuqubha,...
Umbuki zindwendwe ngu- Macia
Ukuba uyathanda siya kukunika uluhlu lweendawo zokutyela esizithandayo kunye neendawo ongaziphoswa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Banyoles